Mandefasa fisie amina FTP misy baiko tokana | Avy amin'ny Linux
Efa hitantsika ny fomba hifandraisana amin'ny mpizara FTP ary hiasa miaraka aminy (na ny atiny) amin'ny alàlan'ny terminal, izany hoe, tsy mampiasa rindran-tsary.
Amin'ity indray mitoraka ity aho dia mitondra plus na fanampiny ho anao ... avelao aho hanazava.
Taona maro lasa izay dia nandao azy ireo aho script bash ampiasaina hanamboarana backup (mitahiry) data avy amin'ny mpizara. Ny script dia naka tahaka andian-lahatahiry (toy ny / sns /), tahiry fanondranana sns ... ary nametaka azy tamin'ny teny miafina ho rakitra .RAR na .7z (mampiasa 7z aho izao), ny hany zavatra tsy nananan'ny script dia hahafahanao mampakatra aorian'ny rakitra voadidy ao amin'ny mpizara FTP sasany, amin'ity fomba ity dia hadika amin'ny toerana hafa ny tahiry avy amin'ny mpizara.
Androany aho dia naka ny script indray hanatsarana kely azy, hanatsara azy ary mazava ho azy fa ny filan'ity farany noresahiko taminao ity dia nanjary mazava, nampakatra ny archive compressed tamina FTP ivelany.
1 Ahoana ny fomba fampidinana amina FTP misy baiko tokana?
1.1 Ampidiro amin'ny FTP misy curl
2 Ary ahoana ny amin'ilay script izay voalaza?
Ahoana ny fomba fampidinana amina FTP misy baiko tokana?
Ny nilaiko dia tamin'ny alàlan'ny baiko tokana hifandray amin'ny FTP misy solonanarana sy teny miafina, ary tsara; ampidiro amina fampirimana manokana ny rakitra.
Fampiharana terminal ahafahako mifandray amin'ny FTP, mametraka ny mpampiasa sy ny teny miafinao ary mampakatra rakitra misy be dia be, fa… mamela ahy hanao izany rehetra izany amin'ny tsipika iray, miaraka amin'ireo masontsivana rehetra efa voalaza…. hey any ny fanontaniana.
Rehefa avy nandinika ny 4 na 5… dia nieritreritra aho !! ... fa misy izany Curl
Ampidiro amin'ny FTP misy curl
Amin'ny curl dia afaka manao zavatra tsy manam-petra aho, angamba afaka manao izay tadiaviko ... ary dia izay!
Amin'ny masontsivana -u dia azoko atao ny manondro ny solonanarana sy ny tenimiafiko, ary koa ny masontsivana -T azoko atao ny milaza azy mba hampakatra rakitra, ary farany hilazako azy hoe FTP aiza ary folder aiza no tiako ampidirina, amin'ny farany dia apetraho ny lalana feno, bebe kokoa na kely toy izao:
Ny ataon'ity dia mifandray amin'ny FTP 192.168.128.2, miaraka amin'ny mpampiasa mpampiasa sy teny miafina tenimiafina ary apetaho amin'ny fampirimana SERVER_BACKUPS niantso ilay rakitra file-backup.7z
Tsotra sa tsy izany? ...
Mazava ho azy, mety mahasoa antsika io ary koa ny baiko irery ihany, na izany aza, ny fomba tsara indrindra hampiasana azy dia amin'ny script toa ... ilay nolazaiko teo aloha
Ary ahoana ny amin'ilay script izay voalaza?
Manatsara ny script aho, indrindra mampiditra fangatahana na tolo-kevitra sasany avy amin'ny mpampiasa.
Ny zavatra voalohany tiako hatao dia ity indrindra no nohazavaiko taminao, miaraka amina baiko tokana hahafahana mampakatra ny rakitra tahiry amin'ny FTP.
Ny zavatra iray hafa natolotry ny mpampiasa ahy dia ny handefa mailaka rehefa vonona ny backup, azoko ampiasaina fandefasana hafatra na a script ivelany, Aleoko mampiasa mailaka mandefa. Ny pitsopitsony amin'ny fampiasana sendmail dia ny fahafahanao mampiasa ny kaonty GMail (na ny hafa) handefasana ilay mailaka, miaraka amina encryption ... SSL ary na inona na inona.
Ary koa, nanoro hevitra ny mpampiasa iray, ho endrika fampandrenesana mavitrika kokoa, handefasana hafatra amin'ny alàlan'ny fampiasana GTPP's XMPP na Hotmail (Live na zavatra toa izany, tsy fantatro akory izay iantsoana azy). Hiezaka ny hanao izany amin'ny GTalk aho aloha, satria ho an'ny Hotmail dia mila mitadidy na manohana ny tenako any ho any aho mba hamoronana kaonty Hotmail, satria miaraka amin'ny fanovana fanovana be dia be ananan'i Microsoft, tsy misy hevitra hoe ahoana izany.
Ny varian'ity farany ity dia ny fampiasana fampandrenesana na hafatra alefa amin'ny Facebook na Twitter. Ho an'ny Twitter azonao ampiasaina Twidge raha ho an'ny Facebook dia azonao ampiasaina fbcmd. Ireo rindranasa roa ireo dia mamela ahy hifandray amin'ireo tambajotran-tserasera ireo amin'ny terminal.
Izaho koa dia mieritreritra ny hanamarina ny fahamendrehan'ny sql aondrako, saingy efa mila fotoana bebe kokoa ity :)
Eny, tsy misy zavatra hafa ampiana intsony ... Amin'izao fotoana izao, mandray ny script maro nataoko tao Bash aho hanatsarana sy hanatsarana azy ireo, antenaiko fa tsy ho ela intsony vao hitondra vaovao 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Mandefasa fisie amina FTP misy baiko tokana
Hanaraka azy amin'ny fahalianana be aho.
- Misy fampandrenesana @ raha tsy mandeha ny mpizara na tsy afaka natao ny fandefasana?
Mahafinaritra tokoa ny mamaky lahatsoratra avy amin'ireo tia terminal / console.
Ahy ny fahafinaretana 🙂
Hevitra tsara, hanamarina raha an-tserasera ny mpizara FTP ary raha tsy izany dia mandefa mailaka ... Hataoko ao anaty kaonty ^ _ ^
Moses Serrano dia hoy izy:
Namboariko ny script backup anao ary namboariko ny tetikasa ahafahanao mampakatra ny rakitra farany mankany Dropbox (https://github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader) ary mandefa mailaka amin'ny farany amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka.
Valiny tamin'i Moisés Serrano
Gaara dia mila manandrana ny fitaovana mety amin'izany ianao: lftp
Izy io aza dia manohana fitaratra, ny fampifanarahana ireo repo avy amin'ny ftp dia tsy voavidy.
Tena mahaliana, ny hatsaran'ity rafitra ity, azonao atao ny mahazo valiny mitovy amin'ny fomba maro; Atoroko anao ny fomba nitantanako nampakatra rakitra tamina mpizara ftp, somary tsy dia mandeha io nefa mandeha foana:
tenimiafin'ny mpampiasa mpampiasa akony
cd / lahatahiry / avy / mpizara / ftp
fisie put file
OOOHHH mahaliana, tsy fantatro izay azo atao toy izao 😀
Sephiroth dia hoy izy:
Fomba hafa, ohatra amin'ny wput:
na ho an'ireo izay tia ny fahatsorana amin'ny script amin'ny alàlan'ny telnet taloha:
ftp -n mpizara_ip << EOF
mpampiasa tsy fantatra anarana test@test.cu
Mamaly an'i Sephiroth
Salama, izaho dia vao manomboka amin'ny Linux ary tsy haiko ny manoratra - eo amin'ny sehatry ny mpampiasa ihany - na ny fandaharana, na zavatra hafa toa izany, tsy dia mahalala an'io aho. Namaky ity lahatsoratra ity aho ary namaky ny faran'ny andalana faharoa ny teny hoe "toerana"; Nampiasaina tamin'ny fomba ratsy io teny io, ny tianao holazaina dia ny: toerana, toerana, toerana, toerana. Ny teny toerana dia midika zavatra hafa satria hoy ny RAE "http://dle.rae.es/?id=NXeOXqS".